Cayayaanka ugu caansan iPhone 7 iyo sida loo xaliyo | Wararka IPhone
Sheyga saxda ah ma jiro (horey ayaan u aragnay Dhibaatooyinka iPhone 6), iyo wax ka yar markaan wajahayno iswaafajin xasaasi ah oo sax ah oo udhaxeeya qalabka iyo softiweerka, astaamaha shirkada Cupertino. Sababtaas awgeed, iyo maadaama xilligii Kirismasku dhammaaday, waxaan u malaynaynaa in qaar badan oo idinka mid ahi aad ugu raaxaysataan qalabkiinna cusub si aad u deggan, Waxaan dooneynaa inaan kuu sheegno waxa ugu badan dhibaatooyinka ka jira iPhone 7 iyo sida loo xaliyo. Sidan ayaad ku sii wadi kartaa inaad ku raaxaysato iPhone-kaaga cabsi la'aan ama dhibaato la'aan. Marka ha seegin isku-dubbaridkeenna guul-darrooyinka ugu badan ee labada macruufka 10 iyo iPhone 7, ma waxaad ka heli doontaa midka kuu soo jiidaya?
Aan halkaas u aadno markaa, aan bilowno inaan taxno waxa ugu badan ee ku fashilmay qalabkii ugu dambeeyay ee mobilada ee ay soo saartay shirkadda Cupertino.
1 My iPhone 7 heses (wuxuu sameeyaa buuqa korantada)
2 Fariinta "adeeg la'aan" ayaa si joogto ah u muuqata
3 Dhibaatooyinka Dhagaha ee Danab
4 Ma arki karo saamaynta muuqaalka ah ee barnaamijka Farriimaha
5 Dhibaatooyinka isku xirnaanta Bluetooth ee iPhone 7
6 Sawax markii la duubayo gebi ahaanba aamus
7 Dhibaatooyinka ku saabsan macruufka 10?
My iPhone 7 heses (wuxuu sameeyaa buuqa korantada)
Waxaan wajaheynaa mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan isla markaana isla markaa khilaafaadka ugu macquulsan ee lagu daadiyay iPhone 7. Isticmaalayaal badan ayaa ka digay in gaar ahaan maalmaha ugu horreeya iibsashada ka dib, marka qalabku ku lug leeyahay hawlo aad u tiro badan, Hadday si firfircoon u shaqeyneyso software ama gadaal, aamusnaan buuxda, waxaa suurtagal ah in la maqlo dhawaq yar oo koronto ah oo ka soo baxaya qalabka.
Si kastaba ha noqotee, muhiim maahan in la joojiyo meertada. Haddii aad sidoo kale ka maqashay tan iPhone-kaaga waa inaadan ka welwelin, dhawaqani waa wax caadi ku ah aaladaha leh processor-rada awooda badan, ha noqdaan kombiyuutarrada ama taleefannada gacanta. Dhawaaqa badanaa lama sii daayo marka culeyska wax-qabadku hooseeyo, mana aha tilmaame nooc kasta oo cilad ah oo taleefanka ku jirta, laakiin waa qaab dabiici ah oo processor-ku isku mid ahi isu muujiyo. Ka saar walwalka dhawaaqan "ku dhowaad aan la maqli karin" oo ku raaxeyso taleefankaaga. Hadday runti kuu keento qanacsanaan la'aan, waad ku celin kartaa Apple Store.
Fariinta "adeeg la'aan" ayaa si joogto ah u muuqata
Qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala iPhone 7 ayaa ka digay agagaarka taariikhda la bilaabay in qalabkoodu uu ka dhammaanayo caymiska buuxa ee buluugga ah. Tani waxay u dhacday si aan kala sooc lahayn. Si kastaba ha noqotee, waxaad ku jirtaa nasiib, wax walbaa waxay muujinayaan inay sabab u tahay dhibaatada software-ka marka loo eego dhibaatada qalabka waxayna leedahay xal fudud oo fudud.
Ugu horreyntii, haddii aan rabno inaan soo celinno adeegga waxaan kaliya u baahan doonnaa inaan dib u bilowno aaladda, waan demin karnaa oo sidii caadiga ahayd ayaan u celin karnaa ama dib ugu bilaabi karnaa adoo riixaya «Awood + Volume-«. Marka tan la dhammeeyo dhibaatada isla markiiba waa la xallin doonaa laakiin mustaqbalka looma qaban doono. Waana la cadeeyay inay dhibaato ku ahayd nidaamka qalliinka, taasi waa sababta ay muhiim u tahay inaan hubinno inaan cusboonaysiino macruufka nooca cusub. Tan awgeed waxaan aadeynaa Dejinta> Guud> Cusboonaysiinta Software-ka oo aan u gudubno nooca ugu dambeeya ee iOS 10 oo aan dhib dambe u qabin dhibaatadan.
Dhibaatooyinka Dhagaha ee Danab
Dhibaato kale oo si caadi ah u caan ah oo dadka isticmaala iPhone 7 ay la kulmeen ayaa ah inay si joogto ah u arkeen qalabka EarPod-ka ee meelaha fog fog si lama filaan ah u joojiya shaqada. Sidan oo kale, ma awoodno kordhi ama yaree mugga, ka mid ah fursadaha kale ee EarPods ay ku soo dhigaan farahayaga iyadoo hal taabasho laga helayo badhamadooda xakamaynta. Waxaan fahamsanahay in dhibaatadani ay noqon karto mid jahwareer leh dadka isticmaala waxay u maleynayaan marka hore in ciladdu ay kajirto samaacadaha dhagaha.
Maaha sidaas, Apple wuxuu xaqiijiyay inay markale tahay arrin software ah oo lagu xalliyo nooca xiga ee macruufka 10, markaa waxaan kugula talineynaa markale inaad hubiso oo ah nooca ugu dambeeya ee macruufka hadii aad rakibtayna, waxay u badan tahay hadaad cilladan haysato inaadan cusboonaysiin. Si aan ugu gudubno barnaamijkii ugu dambeeyay ee softiweerka iPhone waa inaan tagnaa Dejinta> Guud> Cusboonaysiinta Software-ka oo aan u gudubno nooca ugu dambeeya ee iOS 10 si aan u iloobi karno guuldaradan iPhone 7.
Ma arki karo saamaynta muuqaalka ah ee barnaamijka Farriimaha
Mid kale oo ka mid ah dhibaatooyinka caadiga ah oo ay ugu badan tahay aqoon la'aan ama jaahilnimo ku saabsan sida nidaamka qalliinka uu runtii u shaqeeyo. Isticmaalayaal badan ayaa doorta inay dhaqaajiyaan muuqaalka "yareynta dhaqdhaqaaqa" aaladooda moobaylka. Moobaylkan waxay ka maareeyaan inay ka takhalusaan kala-guurka caadiga ah ee aaladda, taasoo ka dhigeysa inay u muuqato mid xawaare iyo jilicsan ku socota. Si kastaba ha noqotee, markaad awood u yeelatid muuqaalkan, nidaamka qalliinka ayaa istaagaya isticmaalka astaamo badan oo is-dhexgal isticmaaleyaal ah. Mid ka mid ah waxyaabahaas oo aanan awood u yeelan doonin inaan aragno wax badan haddii aan shaqadan qabanno waa saameynta muuqaalka ah ee farriimaha farriimaha, kuwa ku caanbaxay barnaamijka fariimaha Apple ee cusboonaysiinta iOS ee ugu dambeeyay.
Si loo baabi'iyo waa inaan tagnaa Dejinta> Helitaanka oo hel "Iska yaree Dhaqdhaqaaqa". Waxaan si fudud u dooran doonnaa ikhtiyaarka "Maya" si aan u awoodno inaan ka soo kabanno saamaynta muuqaalka ah ee ku jira codsiga farriimaha.
Dhibaatooyinka isku xirnaanta Bluetooth ee iPhone 7
Bluetooth, saaxiibkaa khayaaliga ah ee noo ogolaanaya inaan dhageysano muusikada bilaa fiilooyin iyo wax badan oo dheeri ah. Si kastaba ha noqotee, dadka isticmaala qaar ka mid ah iPhone 7 waxay u noqotay madax xanuun dhab ah. Kuwo badan ayaa ogaaday in nidaamka qalliinka uu lahaa dhibaatooyin isku xirnaanta Bluetooth, xitaa hoos u dhigista nidaamka lammaanaha ee Apple Watch.
Si aan isugu dayno markii ugu dambeysay ee Bluetooth mar labaad ugu shaqeeyo qaab deggan waxaan raacnaa tallaabooyinka soo socda: Settings> Guud> Soo Celinta / Dib u celi> "Dib u deji dejimaha shabakadda". Waxaan rabnaa inaan xasuusano in tan sidoo kale loo baran karo xalliyo dhibaato ku saabsan isku xirka WiFi, laakiin dib u dejinta goobaha Shabakadu badanaa way lumisaa furaha sirta ah ee iCloud Keychain, ceeb.
Si la mid ah, haddii dhibaatooyinkaaga Bluetooth aan sidan lagu xallin, waxaa lagugula talinayaa inaad tagto Dukaanka Apple ama aad ka codsato baaritaanka telematic ee Apple SAT oo kuu sheegi doona haddii qalabkaaga Bluetooth uu dhibaato ka soo gaaro.
Sawax markii la duubayo gebi ahaanba aamus
Qaar ka mid ah dadka careysan ee isticmaala ayaa soo sheegay "dhibaato" yar oo inta badan gabi ahaanba aan la ogaan karin. Waana taas markay duubaan fiidiyoow aamusnaan wadata iyaga oo wata iPhone 7 Plus, Markaad dib uhesho duubista, hum yar ayaa laga yaabaa in la maqlo, taas oo u muuqata faragelin uu soo qaaday makarafoonka. Apple uma arkin tan inay tahay dhibaato, waxaana laga yaabaa inay sababo badan u sabab tahay.
Guud ahaan, faragalinta noocan ah waxaa soo saaray isku xirka iyadoo loo marayo Bluetooth aaladaha ay ka mid yihiin Apple Watch ama kuwa ku hadla wireless-ka, taas oo aakhirka soo faragelisa duubista. Sidaa darteed, waxaan ku talinaynaa in haddii aad u socoto si ay u qoraan in aamusnaan dhiman oo aad u ogaatay in aad iPhone ka cabanaya dhibaatadan, Hubso inaad ka furto Bluetooth iyo Wi-Fi si looga fogaado faragalinta suurtagalka ah ee qalabka si xun ugu xirnaa. Sida muuqata kama fekerayaan dhibaatadan halista ah ee ku kaydsan Apple Store markaa way adagtahay in la helo badal ama badal damaanad qaad, maxaa yeelay badanaa waxay u sabab tahay arrimo dibadeed.
Dhibaatooyinka ku saabsan macruufka 10?
Haddii waxa aad haysato ay dhibaato ku yihiin macruufka, ha ka maqnaan Shilalka ugu badan ee iOS 10 iyo xalalkooda.
Dhibaato ma ku haysaa iPhone-kaaga 7? Noo soo sheeg faallooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Cayayaanka ugu caansan iPhone 7 iyo sida loo xaliyo
Qodobka lambar 2, oo ah kan, maxaa igu dhaca, cusbooneysii waxaad rabto oo dib u bilow inta jeer ee aad rabto way sii socon doontaa inay dhacdo
la tf, booska caadiga ah, marka interlocutor idin jawaabayo, gacmaha-bilaash ah boodayaa, dhegta jabinaya.
30 maalmood ka hor waxaan badalay iPhone-kayga 6 ilaa 7. Maanta si lama filaan ah ayuu shaqadii u joojiyay. Waxaan moodayay inuu baytariga yahay, saacad ayaan ku xidhay kumana shidmin. Waxaan isku dayay inaan dib u bilaabo oo tufaaxdii ayaa muuqatay laakiin halkaas ayaa shaashadii madoobaa ay raacday. Waxaan isku dayay ITunes dib u qaabeyn iyo waxba, waxaan helay qalad. Runtii ma aqaano waxaan sameeyo
Jawaab Manuel Bassanini
hello waxaan hayaa iphone 7 meelna lagama helin tufaaxa yar, mana sii wado wax shaqo ah, wuxuu lahaa 42% baytari ka dibna si lama filaan ah uma sii shaqeeyo, maxaan sameeyaa? Waxaan haystay dhamaan iphone-yada mana jirin wax la mid ah waligay igu dhacday
iphone 7-kayga oo lagu daray waxaa ku haray shaashadda howsha daminta dhowr xariiq oo wareega 360 digrii waxbana ma qaban karo.
Waxaan hayaa iphone 7 oo igu qaadatay 3 bilood. Maalin maalmaha ka mid ah subixii ayaan soo qaaday oo wuxuu ahaa madow. Mar labaad ma shaqeyn. Waxay ku jirtay dammaanad waxayna igu beddeleen aniga. Kii labaad wuxuu igu qaatay 3 maalmood. Bateriga si dhakhso leh ayuu u shaqeeyay, waana ku kacday in la buuxiyo. Kadib mar labaad ayaan soon qaatay oo daqiiqad ilaa daqiiqad kale shaashaddu waxay ahayd mid buluug ah. Waxaan helay wicitaano laakiin waan ka jawaabi waayey. U ogolow inay si buuxda u soo dejiso oo halkaasna dib dambe ugama noqonin. Haddana waan u diray si aan u dalbado…. Waxaan haystay iphone badan wax sidan oo kale ahna weligay iguma dhicin.
Iphone-kayga iphone wuxuu sudhan yahay wicitaanka wicitaankiisa wuxuuna bixiyaa qalad wicitaanka. Waxay igu qaadataa 3 daqiiqo inaan waco markale
Ku jawaab Mluz
IPhone-kayga wuu dansaday, waxaan geeyay xarunta adeega ee ICE, mana aysan i caawin karin, waxay ii sheegeen inaan joojiyo ikhtiyaarka raadinta, laakiin waxba, wali ma daarna, mana aha batari buuxinaya. dhibaato.
Ku jawaab MARIO VALVERDE CARDENAS
Waxaan hayaa iphone7plus. Waxay bilowday inay si toos ah u xidho oo ay samayso cod. Waxay iga qaaddaa waxa aan sameynayo waxayna bilaabeysaa lacag. Ma i caawin kartaa?
Ku jawaab mario villega
Waxaan hayaa Iphone 7 kaas oo soconayay 2 bilood, meelna calaamada tufaaxa kama soo muuqan shaashadda, 90% ayaa la igu soo oogay, waxaan u qaatay telefoonka Peruvian-ka dammaanad qaad, way hubiyeen iyo sababta oo ah waxay leedahay khadka timaha oo aan la arki karin Qaybta dhinaceeda way diiday, batteriga waa la wada baabba'ay oo waxba kama qaban karo si aan u shaqeeyo. waxay ahayd fiasco.
Jawaab Juan Manuel Chávez Pinchi
Isla sidaas ayaa igu dhacda! Qof fadlan hadaad hayso wax jawaab ah. Isbarbar dhiga tan, qaybta alaarmiga ma muuqato, oo si cad uma shaqeyneyso.
u gee ishop. Iyagu waa kuwa rasmiga ah ee wax ku kala qaata gudaha Peru waxayna bixiyaan taageero iyadoon loo baahnayn in qalabku ahaado mid dhawrsan. Dammaanad hal sano ah ayaa lagu soo daray sanduuqa. iskuday.
Jawaabta xagga sare
Batariga ayaa iga dhammaaday, waan ku xiraa imikana iima siinayso calaamad aan ku shido
Waxaan hayaa iPhone 7 oo aan haysto waqtiga iyo maalinta, iyo si ay uga muuqato shaashadda, marar badan ayaan shidaa oo ma helo waqtiga iyo maalinta, kaliya sawirka hoose.
Markuu doono ayuu dib u muuqdaa.
Sidee loo sixi karaa dhibaatadan?
Waad salaaman tahay, waxaan ubaahanahay caawimaad, waxaan haystaa Iphone 7 oo lagu daray oo lama filaan ah wassaps-yada kama dhawaqaan
Waxaan aaday goobaha codadka waa la howlgaliyay, ma aqaano, maxaan sameeyaa waxaan u adeegsadaa inaan ku shaqeeyo waana muhiim in uu dhawaaqo markii wasakh yimaado.
Waxaan kaloo arkaa in maalmo ka hor dayax iyo quful quful ka muuqdeen xaga sare
Waxaan rajeynayaa in qof i caawin karo
Ku jawaab Silvia Liliana Campanello
Waxaan haystaa IPhone 7 mana doonayo inuu kiciyo wifi horeyba waxaan ugu soo celiyey noocii ugu dambeeyay 11.3.1 mana jiro wax aan ku noolahay Cuba waxaanan idin xasuusinayaa inaynaan haysan bakhaar tufaax ah waa inaan raadsadaa xal khadka tooska ah, ciddii iga caawin karta waan kuugu mahadnaqayaa, mahadsanid
Ku jawaab mario raul
Waxaan hayaa Iphone 7 Plus. Markaan ku hadlayo taleefankayga gacanta mugga qofka soo wacaya aad buu u hooseeyaa, waa inaan sameeyaa dadaal si aan u awoodo inaan wax u dhageysto iyo mugga taleefankayga gacanta ugu badnaan.
Ku jawaab Fabbie
Waxaan ahay Gabriela Pignoux, Had iyo jeer isticmaal iphone. Hada aad ayey u xun yihiin. Waxaan qabaa seddex dhibaato. Inbadan. Waxaan rabaa in aan ogaado sababta shaashadda I7 ay isku beddeleyso madow, flehita dib u laabashadana si wanaagsan ugama jawaabin
Ku jawaab Gabriela Pignoux
Waxaan hayaa iPhone 7, 2 bilood oo cusub oo la isticmaalo, wuu damay oo dib uma shidin, waxaan ku sii dalacayaa maxaa yeelay waxa iga dhammaaday fiidmeertii, dead Miyaan u dhiibaa mayd? Waxaan akhriyay in qaar badani dhaceen ... Waxaan u diraa adeegga? wali wuxuu ku jiraa damaanad ...
Ku jawaab costanza
Waxaan hayaa Iphone 7 wuu xannibmay oo 2 maalmood ayuu shaashaddu madoobaatay, mazanita ayaa soo muuqata laakiin taleefanka gacantu dib uma shidin waxaan geeyay IShop waxayna ii sheegeen in sabuuradda caqligeedu dhaawacan tahay in taleefanka gacantu sii socdo shaqeysa, waa inay lahaadaan qorshe deg deg ah oo ku saabsan waxyeeladan q waa dhibaatooyinka soo saarista.
Haye, iphone 7 gabi ahaanba waa dansamay kamana shidi karo markale. Dhamaan macluumaadka, sawirada mala waayi doonaa?
Waad salaaman tihiin, dhibaatadaydu waa inaanan cusbooneysiin karin ama aan geli karin dhowr ciyaarood iyo barnaamijyo leh xogta moobiilka wax walbana waan isku dayay, kaliya waa inaan dib u bilaabaa warshad mahadsanid
fart koodh dijo
damiyaa oo iskiis u laalaadaa had iyo goor, wuxuu soconayaa 3 daqiiqo.
Ku jawaab fart sumaysan
Subax wanaagsan, faallooyinka aan ka bixinayo Iphone 7 ayaa ah inuu aad u gaabis yahay oo hadda aan dhibaato la kulmay, waxay ii soo diraan SMS mana furi karo si aan u akhriyo, shaashadda ayaa ku xidhan tan
kiiska iyo markaan furo si aan dib ugu bilaabo kharash badan ayaa ku baxaya si fiican u socodka
Waad ku mahadsan tahay horay waxaanan sugayaa faalladaada.
Ku jawaab ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ
Tan iyo galabnimadayda taleefankayga iPhone 7 ma maqli karo oo waan hadli karaa
Samsung Galaxy S8 cusub ayaa la imaan doonta cusbooneysiin ku saabsan S Health si ay ula dagaallanto Apple
Xanta: Barnaamijka beddelka batteriga ee iPhone 6s ee imanaya iPhone 6